WD-40 र microwaved tampons: खाना फोटोग्राफी को रहस्य प्रकट - समाचार नियम
WD-40 र microwaved tampons: खाना फोटोग्राफी को रहस्य प्रकट
यो बदलाव खाने को नालायक भोजन छोडेर पनि - यो उत्पादनहरु क्यामेरा मा स्वादिष्ट हेर्न बनाउन एक खाना स्टाइलिस्ट को काम छ. छ स्टाइलिस्ट हामीलाई आफ्नो चाल बताउन
शीर्षक यो लेख “WD-40 र microwaved tampons: खाना फोटोग्राफी को रहस्य प्रकट” Angelina Chapin द्वारा लेखिएको थियो, सोमवार 4th जनवरी theguardian.com लागि 2016 15.51 UTC
सबैभन्दा पेशेवर खाना फोटो पछाडि गर्ने दर्शक चाल एक स्टाइलिस्ट छ. यी deceits लिपस्टिक को एक स्पर्श बाट दायरा स्ट्रबेरी redden गर्न, मसले आलु बनाइएका "milkshakes" गर्न. त्यो खाना स्टाइलिस्ट फटाहा र Cheats छन् होइन. तिनीहरूले improvisation को व्यापार मा बस हुनुहुन्छ.
भर 10 घण्टा यो लिन्छ, औसत मा, फोटो शूट पूरा गर्न, स्टाइलिस्ट स्पट मा कुनै पनि संकट समाधान गर्न अपेक्षित छन्. सेट मा कुनै tzatziki? बनाउन फ्रिज मा मेयोनेज वा फिटेको संग के. एउटा ग्राहक टर्की छाला एक "अलि बढी रातो" हेर्न भनेर चाहन्छ? राम्रो हात मा खाना रंग छ.
"शूटिंग जब, तपाईं रोक्न सक्दैन र भन्न: 'अरे, ugh, म यो भूल,' "Denise Stillman भन्छन्, एक ओरेन्ज काउन्टी आधारित खाद्य स्टाइलिस्ट लागि व्यापार मा गरिएको जसले 26 वर्ष. "तपाईं केवल बनाउन पक्का छ [गर्न सेट पर्याप्त सामाग्री ल्याउन] आफ्नो सबै ठेगानाहरु को कवर र त्यसपछि [आफैलाई सोध्नुहोस्], 'अरू के गलत जान सक्नुहुन्छ?' "
तर सबै कुरा faked छ. विज्ञापनदाता बेच्न प्रयास छ उत्पादन अक्सर विशेष छ, यसो Stillman. जब, उदाहरणका लागि, त्यो Breyers लागि एक विज्ञापन शुट, त्यो वास्तविक आइसक्रिम शुट. तर त्यो समलैंगिक Lea फूड्स 'फिटेको शैली छ भने, यो आइसक्रिम यो ऊपर केहि गर्न सकिन्छ खण्डमा - यो स्वादिष्ट देखिन्छ यति लामो समय रूपमा.
एक टेलिभिजन व्यावसायिक वा मुद्रण विज्ञापन शूटिंग कि छैन, एक खाद्य स्टाइलिस्ट गरेको लक्ष्य एक घटक गरेको प्राकृतिक सौन्दर्य जोड गर्न अक्सर छ.
"म खाना लागि कपाल र रहनसहन जस्तै छु,"चार्लोट Omnès भन्छन्, न्यूयोर्क मा आधारित स्टाइलिस्ट. "तपाईं मोडेल देख्दा तल रनवे हिंड्न, तिनीहरूले जस्तो गर्छन्. तर पछि तिनीहरू बनौटको बाहिर आउन, तपाईं जस्तै हुनुहुन्छ, 'वाह।' "
तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाना फोटो खानपान कवर सदृश चाहनुहुन्छ भने, हामी मदत गर्नेछ केही समर्थक सुझाव संकलन गर्नुभएको. छ खाना स्टाइलिस्ट हामीलाई साधारण व्यञ्जन आफ्नो नजिक-अप लागि तयार हेर्न बनाउन कसरी आफ्नो रहस्य सेवा.
Enchiladas: मसले आलु थोक को उपस्थिति दिन
एक स्वादिष्ट-देख enchilada लागि, मसले आलु थप्न. तस्वीर: रिक गेल द्वारा फोटो. किम Krejca द्वारा खाद्य स्टाइल.
मेक्सिकन खाना छैन भन्दा तस्वीरहरु छ. कुनै एक किम Krejca भन्दा यो राम्रो थाह, दक्षिण-पश्चिमी भोजन को धेरै संग काम गर्ने एक फिनिक्स-आधारित स्टाइलिस्ट. "सस संग Enchiladas को सिमी मा आक्रान्त [हो] धेरै नेत्रहीन सुखद छैन,"त्यो भन्छन्. "तपाईं अझै पनि कि परिमार्जन गर्न तर खाना साँचो हुन छ।"
को enchiladas bulkiness को उपस्थिति दिन (माथिको देखेको), त्यो तत्काल मसले आलु तिनीहरूलाई भरी, एक स्टाइलिस्ट गरेको जाने-किनभने तिनीहरू बनाउन सजिलो र मोल्ड छन् भरने. त्यसपछि Krejca जहाँ tortillas खोल्न छेउसम्म मासु र शाकाहारी थपियो. पकवान पूरा गर्न, त्यो चीज माथि पूर्ण ढल्छ बनाउन एक गर्मी बन्दूक प्रयोग.
tacos: कस्मेटिक स्पंज को गोले खुला राख्न
tacos: कस्मेटिक स्पंज प्रयास, गोंद, र WD-40. तस्वीर: रिक गेल द्वारा फोटो. किम Krejca द्वारा खाद्य स्टाइल.
वास्तविक जिन्दगीमा, Tacos एक स्वादिष्ट गडबड छन्. तिनीहरूलाई क्यामेरा मा दिन लायक बनाउन, Krejca दुई ​​tortillas सँगै चिपके र गोले खुला राख्न मासु पछि कस्मेटिक स्पंज राखिएको. गाढा र रसदार-देख मासु लागि, त्यो भान्सा फूलगुच्छा भनिन्छ खैरो सस संग टुक्रा चित्रित, पानी र खाना रंग बनेको. Krejca त्यसपछि WD-40 संग भरने sprayed, मेक्सिकन खाना चम्कनु बनाउन उनको गोप्य हतियार. Stillman एक थप जीवंत रंग लागि diced टमाटर ठाउँमा रातो खुर्सानी प्रयोग र तिनीहरूले नम र ताजा हेर्न त सिमी मा मकै सिरप खन्याइदिएकी.
धान्य: पुरुष बाल उत्पादनहरु र सनस्क्रीन बनाउन सिद्ध 'दूध'
तपाईं आफ्नो अनाज सुक्खा वा बाल क्रीम संग रुचि? तस्वीर: लघु पोखरी निर्माण मा क्रिस Elinchev द्वारा फोटो. Tamara Kaufman द्वारा खाद्य स्टाइल.
यो आफ्नो भोक बर्बाद हुन सक्छ, तर अनाज फोटो प्रयोग दूध सामान्यतया नक्कली हो. वास्तविक सामान चाँडै बनाउँछ देखि cornflakes soggy हेर्न, खाना स्टाइलिस्ट विकल्पहरू साथ आए. यो फोटो मा, विस्कन्सिन आधारित Tamara Kaufman Wildroot प्रयोग, एक सेतो कपाल एक संग पुरुषहरु को लागि क्रीम सनस्क्रीन लोशन-धेरै स्टाइलिस्ट Covet कि स्थिरता जस्तै. Krejca सेतो गोंद को पुरानो स्कूल विधि रुचि, जो सिर्फ वास्तविक सम्झौता जस्तै फोटो. जब विशेषज्ञहरूले वास्तविक दूध प्रयोग गर्छन्, यो केवल एक धेरै सानो राशि छ. मिशेल राबिन अनुसार, एक टोरन्टो आधारित खाद्य स्टाइलिस्ट, तपाईं दूध पातलो तह यसलाई तरकारी छोटा भरिएको कचौरा मा अनाज को सबै भन्दा सुन्दर टुक्रा ठाँउ र कवर गर्न सक्नुहुन्छ. "द छोटा तरल resists र यसले सम्पूर्ण कचौरा अनाज को Mounds भरिएको छ जस्तो देखिन्छ,"त्यो भन्छन्. "द टुक्रा राम्रो एक लामो समय को लागि कुरकुरा रहन हुनेछ।"
कफी: तल पानी हाले सोया सस र gelatin एक चिल्लो नजर दिन
एक चिल्लो-देख कफी लागि, पानी र gelatin प्रयास. तस्वीर: Beth Galton द्वारा फोटो. Ashlee खरानी द्वारा Retouching. चार्लोट Omnès द्वारा खाद्य स्टाइल.
काला कफी किनभने यसको तेल sheen को काम गर्न कठिन छ. मा Latte वा cappuccino, को फोम चाँडै वाफ बन्नु हुनेछ. यो फोटो मा, Omnès भान्सा फूलगुच्छा संयोजन प्रयोग, कफी एक चिल्लो नजर दिन पानी र gelatin. एक चिम्टी मा, राबिन एक लोकप्रिय क्यानाडा ब्रान्ड को सेट मा क्रीम र रस browner संग सुधार थियो पानी-तल सोया सस प्रयोग र एक पटक छ. "म मा काम गर्ने बोर्ड देख्न र म जस्तै छु: 'त्यो हास्यास्पद छ, किनभने एक कफी छैन,' "त्यो भन्छन्. Kaufman सम्भव गर्दा वास्तविक सम्झौता प्रयोग, तर ताजा रक्सी खींचना अनुकरण एक eyedropper संग परिधि वरिपरि Soapy पानी घटेको भन्छन्. यो froth, स्टाइलिस्ट भन्न, अक्सर देखि बनेको छ पाइप साबुन फोम.
टर्की: यो भित्र कच्चा र रक्तपातपूर्ण हुन सक्छ, तर छाला राम्रो देखिन्छ
पाकेका टर्की अक्सर विज्ञापन मा विशेष छ. तस्वीर: मार्शल ट्रय द्वारा फोटो. ग्रेस Knott द्वारा स्टाइल Prop. चार्लोट Omnès द्वारा खाद्य स्टाइल.
हरेक घर महाराज यो भित्र मा बाहिर मा चरा खस्ता र नम गर्न कठिन छ थाह. Luckily, खाना स्टाइलिस्ट मात्र सौंदर्य ध्यान केन्द्रित गर्न, जो तिनीहरूले कहिल्यै पूर्ण रूपमा एक पकाउन अर्थ. "यो छाला नम देख रहन्छ त्यसैले तिनीहरूलाई overcook गर्न महत्त्वपूर्ण छ, पोटिलो र रसदार,"Omnès भन्छन्. "यी जब तपाईं यो हेर्न आफ्नो मुख पानी बनाउन दृश्य cues छन्।" नयाँ-यर्क आधारित स्टाइलिस्ट ब्रायन प्रेस्टन-कैम्पबेल उहाँले अक्सर कि "सिद्ध नायक बर्ड" प्राप्त गर्न प्रत्येक केही घण्टा लागि पाँच वा छ turkeys roasts भन्छन्. "यो भित्र अझै पनि कच्चा र दयालु को रक्तपातपूर्ण छ," उस्ले भन्यो. "यो खतरनाक को प्रकारको छ तर यो फोटो मा अन्त उत्पादन बारेमा।"
यो शट मा, त्यसैले यो ओवन मा आंसू छैन Omnès तल टर्की गरेको छाला पिन. त्यो पैन लाइन र यसलाई पालो खस्ता सट्टा स्टीम थियो त एक पानी-भिगो कागज तौलिया संग बर्ड भरी. कि खैरो हासिल गर्न, Glistening नजर, त्यो पानी को एक मिश्रण संग टर्की ब्रश, भान्सा फूलगुच्छा र पकवान साबुन.
आइसक्रिम वा फिटेको: छोटा, मकै सिरप र frosting
Frosting प्लस Icing चीनी एक प्रभावशाली-देख आइसक्रिम बनाउँछ. तस्वीर: मार्शल ट्रय द्वारा फोटो. ग्रेस Knott द्वारा स्टाइल Prop. चार्लोट Omnès द्वारा खाद्य स्टाइल.
आइसक्रिम मानव मोडेल थिए भने, त्यो एक DIVA हुनेछ. यो मिठाई आकार गर्न कठिन छ, र तपाईं एक जमाई ठाउँ मा शैली हुनुहुन्छ भने, चाँडै पिघलने. यो टाउको दुखाइ जोगिन, विशेषज्ञहरु अक्सर अन्य सामाग्री बारी. बायाँ मा "आइसक्रिम" सिर्जना गर्न, Omnès Icing चीनी संग frosting मिश्रित (दायाँ कोन वास्तविक सम्झौता हो), तर सबै भन्दा साधारण नक्कली आइसक्रिम नुस्खा तरकारी छोटा संयोजन छ, धुलो चिनी र मकै सिरप.
अन्य Milky मिठाईहरू लागि, स्टाइलिस्ट धेरै भाडे छ. फिटेको एक dollop लागि, Omnès कि "शिथिल हुनु वा रुन्छ छैन" एक गैर-डेयरी क्रीमर प्रयोग. Kaufman Barbasol शेविंग क्रीम तर टिप्पणीहरू रुचि: "गल्ती एक खानको प्रयास गर्ने महिला छैन खुसी थियो।" Milkshakes लागि, यो बाक्लो र घुमाउरो गर्न सजिलो छ किनभने Stillman खट्टा क्रीम प्रयोग.
पेय: भनेर ठण्डा ग्लास? यो स्प्रे-मा दुर्गन्ध छ
आफ्नो पेय सही sheen अभाव भने, बस यसमा केही दुर्गन्ध स्प्रे. तस्वीर: Alamy
विज्ञापन रक्सी लागि नभएसम्म स्टाइलिस्ट वास्तविक Booze बर्बाद छैन. ककटेल बनाउन, Omnès पानी मा खाना रंग घोला जान सक्छ, एक चाल Kaufman पनि पतला भान्सा फूलगुच्छा देखि "chardonnay" सिर्जना गर्न प्रयोग. सत्य मा, तरल आफैले sideshow छ. "ककटेल बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग दृश्य cues छन्,"Omnès भन्छन् - यस्तो बरफ रूपमा cues, सीटी, ग्रीस, बुलबुले र froth. "तिनीहरूले [पेय बनाउन] ताजा हेर्न। "
margaritas र daiquiris जस्तै स्थिर पेय लागि, पेशेवरों भर बरफ पाउडर, को बिट gelatin जब तरल संग मिश्रित कि चोट बरफ जस्तो. तिनीहरू पनि नक्कली प्लास्टिक वा एक्रिलिक बरफ घन प्रयोग, जो margaritas को रिम मा तातो क्यामेरा रोशनी र vaseline अन्तर्गत ढल्छ छैन. चिसो सिर्जना गर्न, Stillman कोट स्प्रे-मा दुर्गन्ध र साथ एक बियर मग शीतल पेय संक्षेपण को मोती संग चिसो चिसो हेर्न बनाउन Scotchguard र ग्लिसेरिन को एक मिश्रण प्रयोग. "यो कस्तो परेशानी अन्यथा हुनेछ,"Stillman भन्छन्. "यो बाटो, तपाईं ग्लास मा फिल्टरग्यालेरी को स्तर चयन गर्न सक्नुहुन्छ। "
बाफिलो पास्ता: धूप भाप को उपस्थिति दिन्छ
बाफ डाँडामा भन्दा तुवालो जस्तै पास्ता देखि माथि rises जब त्यो क्षण क्यामेरा मा स्वाभाविक कब्जा गर्न कठिन छ. Kaufman एक टिन पन्नी प्याकेज लुकाउँछ बाफ चिप्स को पास्ता कचौरा भित्र र वाष्प सिर्जना गर्न पानी भन्छन्. एउटै प्रभाव प्राप्त गर्न, त्यो पनि धूप रोशनी छ र पछि Photoshop संग छडी हटाइएको, जबकि अन्य चाल एक वस्त्र स्टीमर समावेश वा चुरोट धुवाँ. टाढा द्वारा सबैभन्दा रोचक विधि पानी-भिगो tampons माइक्रोवेव छ (कपास बलमा साथै काम) र एक पकवान पछि तिनीहरूलाई मुर्दा गाड्नु. "म सिर्फ मामला मा मेरो किरा मा उनलाई छ,"Kaufman भन्छन्. यो प्रविधी जस्तोसुकै, भन्छिन् बाफ सधैं अँध्यारो पृष्ठभूमिमा विरुद्ध गोली गर्नुपर्छ.
← 10 सबै भन्दा राम्रो यात्रा अनुप्रयोगहरूको Tipron: एक रोलिंग नेत्रगोलक रोबोट प्रोजेक्टर [भिडियो] →